Hoa phù dung: ý nghĩa và cách trồng cây phù dung ra hoa đẹp | Hatgiongtihon.net - trung tâm cung cấp hạt giống tí hơn
Hoa phù dung: ý nghĩa và cách trồng cây phù dung ra hoa đẹp | Hatgiongtihon.net
Đang Đọc: Hoa phù dung: ý nghĩa và cách trồng cây phù dung ra hoa đẹp | Hatgiongtihon.net in Hatgiongtihon.net
Idandelion yintyatyambo ekhethekileyo. Le ntyatyambo inxulunyaniswa nobomi bentsomi entle kodwa enethamsanqa. Akunjalo kuphela, iintyatyambo nazo zinobuhle obahlukileyo, ngakumbi xa imibala yazo iguquka ngokuqhubekayo. Masifunde ngakumbi malunga nentyatyambo ye-ephemeral kweli nqaku!
2 Intsingiselo yegqwirha
2.1 Ibali lobugqwirha
2.2 Intsingiselo yobugqwirha
3 Iimpawu zeentyantyambo zegqwirha
4 Ukusetyenziswa kwehazel yobugqwirha
4.1 Ukuhlobisa kwe-Ephemeral, ukwenza imiboniso
4.2 Iziphumo zonyango
5 Indlela yokukhulisa ephedra
5.1 Indlela yokusika
5.2 Indlela yokwenza i-branching
5.3 Indlela yokwahlula iingcambu
5.4 Indlela yokuhlwayela imbewu
5.5 Indlela yokungcwaba amasebe
6 Indlela yokunyamekela i-hazel yamagqwirha
Le yintyatyambo enegama lenzululwazi elithi Hibiscus Mutabilis, yeyosapho lweMalvaceae. I-Confederate Rose ngesiNgesi. Ukongeza, baziwa nangamanye amagama amaninzi anje ngoMoc Lien, Moc Phu Dung, Phung Truc Phung, Terrain Vang, Mountain Succubus, Tuyet Tuu Dung, Dew Dew, njl.
Imvelaphi yomkhiwane isuka empuma India. Kamva bakhuliswa ngakumbi nangakumbi e-China, eJapan, kwiiPhilippines, e-United States … EVietnam, le ntyatyambo ikhuliswe ikakhulukazi kwimimandla esenyakatho.
Intsomi yentyatyambo ye-ephemeral inxulunyaniswa nesithixokazi esihle uPhu Dung. Kuthiwa ngaloo mini, kwakukho intsomi egama linguPhu Dung, ubuso bayo obuhle babuhlala buzaliswe lusizi. Wathi akumbona enje, uKumkanikazi, ngenxa yokumthanda kwakhe, wamthumela ehlabathini ukuba ajikeleze ihlabathi ukuze azilibale iintsizi zakhe. Noko ke, wayethe phithi bubuhle behlabathi kangangokuba waphulukana nekhubalo waza wabuyela ezulwini.
Emva koko wadibana nenkwenkwe ehluphekayo egama linguDong Tam. Wayemlandela egoduka, yaye umhla nezolo wayenyamekela unina owayegula. Kungekudala emva koko, aba babini batshata baza baba yindoda nomfazi. Ngemini yokubuyela kwakhe ezulwini, akazange abuye de abuye, ngoko unina wathumela umntu ukuba aye kumbamba. Ngokungxama kwakhe ukuhamba, wakwazi ukunika indoda yakhe iperile njengesibambiso.
Emva kokuba ebuyele ezulwini, waba buhlungu ngakumbi waza wacela unina ukuba amvumele abuyele emhlabeni. Ekugqibeleni uKumkanikazi wavuma. Kodwa ngoku, ixesha elikwilizwe elingaphantsi kweminyaka engama-20 kamva, uDong Tam unomfazi omtsha kunye nabantwana abancinci ababini. UFurong uthobekile kodwa uzifihla ngendlela yomfana. Aba babini basabonana ngokubulela kwigugu kwaye badibane ngokufihlakeleyo. Kodwa ethwele uxanduva kunye nomthwalo wentsapho enabantwana ababini abancinci, uDong Tam wayengenakukhetha ukuba kunye naye.
Ngenxa yokuba wayebandezelekile kangangokuba wayengenakukwazi ukuhlala nomntu awayemthanda, wafa wajika waba yintyatyambo eethe-ethe nentle. UKumkanikazi uMama wayengafuni ukuba adityaniswe ne-Dong Tam ngonaphakade, ngoko ke wayevumela le ntyatyambo ukuba iqhakaze emini kwaye iphele ekutshoneni kwelanga.
Kungenxa yokuba ibali lentyatyambo ye-ephemeral liye lasasazwa ukususela kwixesha elidlulileyo, ngoko ke intsingiselo yabo iyakhiwa ukusuka apho. Intyatyambo entle yeenyibiba imele abafazi abancinci kunye namakhosazana angakhululekanga ukuba anxibelelane nehlabathi langaphandle, ke nangona emhle, ahlala ethwele usizi olunzulu.
Nangona inobuhle obunomtsalane, iyadubula ngokukhawuleza ize ibune. Ngoko ke, umfanekiso wentyatyambo ye-ephemeral ufuzisela ubomi obufutshane, ukunyaniseka kunye nobuhle, kungakhathaliseki ukuba bukhazimla kangakanani, ngamanye amaxesha buphela.
Ayisiyiyo loo nto kuphela, intsingiselo yentyatyambo ye-ephemeral yenza ukuba abantu bacinge ngebali lothando elilusizi neligwenxa. Iipetali ze-ephemeral zitshintsha umbala ukusuka kusasa ukuya emva kwemini kwaye ngosuku olulandelayo ziphelile. Uthando nalo luyatshintsha ngolo hlobo, xa lonwabile, ngamanye amaxesha lubanda, uthando alunasiphelo kodwa ekugqibeleni luya kwaphula ngokwemithetho yendalo. Ngoko ke, akufuneki silindele okanye sithembe uthando olungaguqukiyo, kodwa sisoloko samkele amahla-ndinyuka xa siseluthandweni.
Iimpawu zeentyantyambo zegqwirha
I-Eucalyptus sisityalo somthi, esihlala ixesha elide. Zidla ngokukhula ematyholweni, zithwele iinwele ezimfutshane kwaye zimile okwenkwenkwezi. Amagqabi makhulu kakhulu, ububanzi bunokufikelela kwi-15cm. Amagqabi aluhlaza obumnyama, anamacembe ama-5, kwaye i-petioles ifana nentliziyo. Imida yamagqabi irhangqwe kwaye umzantsi unoboya obuninzi kunomphezulu.
Kukho iintlobo ezimbini zeentyatyambo, ezizintyatyambo ezingatshatanga (iintyatyambo ezinamabala ama-5) kunye neentyatyambo ezimbini (ezineentyatyambo ezininzi). Iintyatyambo xa zidubula zinkulu, zinwebeka njengesitya. Amagqabi acekeceke kwaye anesiponji njengeconfetti.
Eyona nto ikhethekileyo yintyatyambo etshintsha umbala ngokuqhubekayo amaxesha ama-3 ukusuka kusasa ukuya ebusuku. Ekuseni iintyatyambo ziyaqhakaza zimhlophe, emini iya kuba pink kwaye ebusuku ibe mnyama ibe bomvu, ize iphele.
Ukucacisa utshintsho lombala weentyatyambo, kungenxa yokuba ziqukethe i-anthocyanins kunye ne-carotenoids. I-anthocyamine iyatshintsha ngokuxhomekeke kwi-asidi kunye ne-alkalinity. Ngokukodwa, ekuqaleni, i-anthocyamine ayinambala, ngoko ke iintyatyambo zimhlophe xa ziqala ukuqhakaza. Xa kukho ukukhanya kwelanga, i-anthocyamine inombala kunye ne-asidi iyanda, nto leyo eyenza iintyatyambo zitshintshe umbala ngokuthe ngcembe ukusuka kwipinki ukuya kubomvu.
Isiqhamo si-globose, sineenwele ezimthubi. Ngaphakathi kwesiqhamo kukho imbewu ye-ovoid, enemibimbi emincinci eneenwele ezinde.
Ukusetyenziswa kwehazel yobugqwirha
Ukuhlobisa kwe-Ephemeral, ukwenza imiboniso
Umthi we Eucalyptus ukhula ematyholweni, unamagqabi amakhulu, ngoko ke udla ngokutyalwa njengomthi womthunzi. Imithi inika iintyatyambo ezintle, ngoko azincedi kuphela umthunzi kwaye zithintele uthuli lwasehlobo, kodwa ziphinde zenze i-accents ye-landscape, ukuchukumisa abantu kunye nokutsala ingqalelo yomntu wonke.
Namhlanje, abantu bathanda kakhulu kwaye bahlala betyala imithi ye-eucalyptus ukuhombisa izitrato, iipaki, iivillas, iikhampasi, iincinci, iigadi okanye izityalo ezifakwe kwiimbiza eziza kuboniswa phambi kwezindlu kunye neebhalkhoni. Iintyatyambo ziya kuzisa indawo eluhlaza, entsha kunye nenemibala.
Ayisiyiyo loo nto kuphela, iintyatyambo nazo zincothulwe amasebe entyatyambo entsha ukubeka iivazi zokuhombisa igumbi lokuhlala, ikhitshi, idesika, itafile yokufunda okanye ifestile, njl.
Ukongeza ekubeni sisityalo sokuhombisa, singasetyenziselwa ukulungiselela amayeza asempuma ukunyanga izifo ezininzi. Zonke iindawo zesityalo se-plantain ukusuka kwiintyatyambo, amaqabunga, iingcambu, amagxolo, njl.
Umzekelo, ukuba iintyatyambo zivunwa xa zisandul’ ukuqhakaza kwaye zomiswe okanye zomiswe emthunzini, zinokusetyenziswa njengeyeza lokunyanga amathumba, ukudumba kwepepile, njl njl. Ehlotyeni okanye ekwindla, ukomisa emthunzini kuya kuba nefuthe lokukhupha ityhefu, ukucoca ubushushu, ukupholisa isibindi, …
Ukongeza, iindawo zomthi zikwasetyenziselwa ukulungisa amayeza amaninzi ahlukeneyo anyanga ngokufanelekileyo izifo ezifana nesifo samathambo, ukutshisa, amehlo abomvu, izibonda, i-hemoptysis, i-shingles, i-conjunctivitis, kunye ne-conjunctivitis. ukulunywa zizinambuzane, iintlungu zesisu ezibangelwa ziintshulube, …
Indlela yokukhulisa ephedra
Elona xesha lilungileyo lokutyala idandelion kusentwasahlobo. Ngaphambi kokutyala i-eucalyptus, kuyimfuneko ukulungisa umhlaba ofanelekileyo. Izithole zinokukhula kakuhle kumhlaba oyisanti, onomoya, nongenamanzi.
Irharnati ingakhuliswa egadini okanye embizeni. Ukuba utyala egadini, nqumla onke amasebe ngaphambi kobusika kwaye wongeze umhlaba omninzi entwasahlobo. Ukuba ukhula iintyatyambo kwiimbiza, qiniseka ukuba umhlaba ofakwe ebhodweni ugcina ukufuma kakuhle kwaye udinga ukuthena emva kweentyatyambo zezityalo.
Okwangoku, abantu badla ngokusasaza baze bakhulise i-eucalyptus ngeendlela ezinjengokusikwa, ukucandwa kweengcambu, ukuhluma, kunye nembewu.
Ukusikwa ngokuqhelekileyo kuqhutyelwa ebusika xa umthi ulahlekelwe amagqabi awo onke. Ngelo xesha, unqumle lonke isebe eliphezulu, ukhethe amasebe alungileyo ukusika kwi-cut cut nganye malunga ne-15-20cm ubude. Hlanganisa malunga nama-50 amasebe kwi-1 isithungu kwaye usike kumhlaba oyisanti, ukuya ebusika. Xa usikwa, zibeke ngokuthe ngqo emngxunyeni wokutyala, emva koko ugqume ngesanti emanzi kunye nomaleko malunga ne-10cm ubukhulu. Qaphela ukuba indawo yokusikwa kufuneka ibe nelanga kwaye ifakwe umoya kwaye isanti ihlala igcinwe ifumile. Ngentwasahlobo yonyaka ozayo, xa ingcambu iphilile, isebe ngalinye kwi-bunch lingatyalwa ebhedini. Umthi uya kumila ngokukhawuleza.
Indlela yokwenza i-branching
Elona xesha lisebenzayo le-branching nguJulayi-Agasti Emva kokukhetha amasebe aphilileyo, afanelekileyo, qhubela phambili ekuhlanganiseni kunye nokukhupha njengezinye iintlobo zemithi. Malunga nenyanga enye emva kokuhlanganiswa, amasebe aya kukhula iingcambu kwaye alinde enye inyanga ukuze akwazi ukunqumla isityalo esingunina. Emva koko utyale isityalo esifakwe emanzini egadini okanye embizeni kwaye unakekele kakuhle isityalo ukukhawuleza ukulungelelanisa indawo entsha.
Indlela yokwahlula iingcambu
Abantu bakholisa ukwenza le ndlela yokucanda ekupheleni kukaFebruwari.Qala uncothule umthi uze wahlule isiphunzi ngemela ebukhali. Qaphela ukuba ingcambu nganye kufuneka ibe malunga ne-4-5 yehlumela. Emva koko qhubeleka ngokutyala isiphunzi kumhlaba ofumileyo kwaye usinyamekele kakuhle. Emva kweveki enye, isityalo sinokuziqhelanisa ngokupheleleyo kwaye sikhule kakuhle.
Indlela yokuhlwayela imbewu
Imbewu inoboya ukuze ikwazi ukubhabha nomoya, emva koko iwele emhlabeni kwaye intshule kwizityalo ezitsha. Endaweni yokuvumela isityalo sizisasaze ngokwemvelo, kunokwenzeka ukuqokelela imbewu kwaye ukhethe imbewu elungileyo, enempilo yokuhlwayelwa. Oku akuyi kuchaphazela uphuhliso lwexesha elizayo lwesityalo seentyatyambo.
Indlela yokungcwaba amasebe
Le ntyatyambo ye-ephemeral ikhethekileyo, amasebe awo anokukhula ngokulula iingcambu ukuba kukho umhlaba ngaphandle kokwahlula amasebe. Ngoko ke, ukusasaza i-eucalyptus, unokuzama indlela yokungcwaba amasebe malunga noJuni-Julayi. Elula kakhulu, kufuneka nje uthathe amasebe amade ngaphandle komkhiwane kwaye ujike kumhlaba omanzi. Emva kwenyanga enye, isebe liya kukhula iingcambu, kwaye emva kweenyanga ezi-2, linokunqunyulwa kwisityalo sikamama. Emva koko, zombini izityalo kunye neengcambu ziyatsalwa kwaye zingcwatywe kwi-greenhouse ukuya kwi-overwinter. Ngentwasahlobo yonyaka ozayo, izityalo ziya kutyalwa emhlabeni.
Indlela yokunyamekela i-hazel yamagqwirha
Sisityalo esithanda ukukhanya, sinyamezela ukufuma, sinyamezela umthunzi, kodwa asibanda. Ukuze isityalo siphile kakuhle ebusika, ukugcina ubushushu kwi-greenhouse malunga ne-3 – 10 degrees Celsius kufanelekile. Ngentwasahlobo, isityalo sinokususwa kwindawo enelanga.
Ngokumalunga nokunkcenkceshela, imfuno yamanzi yokugcina izityalo zifumile ukuze zikhule kakuhle nayo iphezulu kakhulu. Ngoko nikela ingqalelo ukunkcenkceshela izityalo, kodwa ungawankcenkceshele, ubangele ukuba iintyatyambo zibe namanzi. Ngokukodwa kwixesha leentyatyambo, kuyimfuneko ukunkcenkceshela ngokwaneleyo, kwaye kufuneka unkcenkceshelwe ekuseni xa iintyatyambo zihluma ukugcina iintyatyambo zitsha imini yonke. Ngexesha lemvula, akuyimfuneko ukunkcenkceshela kakhulu, kodwa amanzi emvula kuphela anele, kodwa ngexesha elitshisayo nelomileyo, nikela ingqalelo ngexesha elifanelekileyo kunye namanzi aneleyo kwizityalo zeentyantyambo.
Ngokumalunga nokuchumisa, kucetyiswa ukuba uchumise izityalo kanye ngonyaka kunye nezichumisi zeekhemikhali okanye izichumisi eziphilayo, ngakumbi kwixesha lokukhula kwezityalo kunye nokulungiswa kweentyantyambo. Xa uchumisa, kuyimfuneko ukumba umsele ojikeleze ingcambu uze ufefe ngesichumisi, amanzi uze ugcwalise umsele ngomhlaba.
Ukongezelela, kufuneka uhlambulule amasebe rhoqo ukuze umthi weentyatyambo udibanise ngokukhawuleza kwaye unike iintyatyambo ezintle. Ukuba isityalo sikhule embizeni, kunokwenzeka ukunqumla onke amasebe emva kwexesha leentyantyambo ukwenzela ukuba kunyaka ozayo xa umthi uphinde utyalwe, uya kukhula amasebe amatsha. Kwizityalo zangaphandle, kucetyiswa ukuba unqumle onke amasebe ebusika, uvale umhlaba ukukhusela ukubanda. Xa imozulu ishushu, unokususa isigqubuthelo somhlaba ukuze isityalo siqhubeke sikhula, siphuhlise amasebe amatsha kwaye sivelise iintyatyambo ezininzi.
Ngaloo ndlela, i-FPF iye yabelane ngalo lonke ulwazi oluthile malunga nentsingiselo, iimpawu kunye nendlela yokukhulisa ephedra. Ndiyathemba ukuba olu lwazi lungentla luya kuba luncedo, kukunceda unakekele izityalo ezinempilo kunye nenhle ye-lily-of-the-valley!
>> Bona ngakumbi: Intsingiselo, indlela yokukhulisa nokunyamekela camellia yam
Hoa phong lữ thảo – phong lữ thảo rủ, hoa ban công đẹp | Hatgiongtihon.net